सुनको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्यमा सामान्य बृद्धि भएको छ । बुधबार प्रतितोला ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मुल्य आज ३ सयले बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार छापावाल सुनको मुल्य आज ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, प्रतितोला ९१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज प्रतितोला ९१ हजार ९ सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ ।
यसैगरी, चाँदीको मुल्य आज १२ सय ७० रुपैयाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ । हिजो प्रतितोला १२ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
७० करोड कर तिर्न सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूको आलटाल
राजधानीका ठूला सपिङ मल र कम्प्लेक्सहरूले सम्पत्ति कर तिर्न आलटाल गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाको म्याद दिएर घर–जग्गा तथा सम्पत्ति कर बुझाउन आग्रह गरेको भए पनि सो अवधिभित्र उनीहरूले कर बुझाउन आलटाल गरेका हुन् ।
सो अवधिमा एनआरटी क्लब र काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजबाहेक अन्यले सम्पर्कसमेत नगरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बताए । तोकिएको अवधिका कर तिर्न नआएपछि महानगरले बुधबार माइकिङ गरी सचेत गराउँदै घर, पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्नेसम्बन्धी सूचना टाँस गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।